Tsy rariny intsony ry reto a !!!
Date: 08 février 2018 - 19:31
Tena efa tsy rariny ry reto a ! Izay ataony ireo bandy pelaka isany reo. Aiza ve izay vazaha mivoaka dia hifandrombahana daoly. Marina fa samy te handeha andafy fa ny vazaha lehilahy dia anay vehivavy fa ny vazaha vehivavy no tokony hifandrombahan-dreo.
Re: Tsy rariny intsony ry reto a !!!
Date: 09 février 2018 - 07:04
galasca>ka ataonji inona ary vazah lahy pelaka, matoa lasany dia pelaka zay